Mkpụrụ ndụ ntorobịa NAD +: coenzyme dị mkpa na ahụike mmadụ-Shangke Chemical
O bu ihe nwute, na oria, nkani na ndu ma obu ibi ndu adighi nma, ahu gi amalite inwe nsogbu di iche iche na ahu na aru oru ya dara ada nke oma. Obere nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) dị n'etiti erughị eru ndị a, ọ bụ ebe ahụ NAD + emeju na abia n'aka iji mechie oghere erughi ihe, karisia iji kwalite usoro ime agadi.
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) na-ezo aka na coenzyme nke nwere adenine na nicotinamide. Celllọ obibi ọ bụla nwere ogige ọgwụ a, nke sitere na Nicotinamide Riboside. Ọkwa NAD dị n’ahụ mmadụ na-emetụta ogo ịka nká.
Mgbe abụba na glucose na-ahapụ ike, NAD + enzyme na-eme ka njem nke ike ahụ gaa na mitochondria maka ịtụgharị ọzọ n'ime ike cellular. Ma ọ bụghị ya, n'ihe banyere adịghị ike NAD +, nnyefe nke ike na cell na-akpaghasị, nke a na - ebute nsị mitochondrial, nke na - eme ka usoro ịka nká dị ngwa.
Na-elekwasị anya na mbido Sirtuin, ọ bara uru ịmara na ọrụ bụ isi nke enzymes sirtuin bụ gbanyụọ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-eme ka ịka nká dịkwuo mma. Mkpụrụ ndụ ihe nketa gụnyere ndị na-ekere òkè na njikọta abụba na nchekwa, mmebi yana iwu shuga ọbara. Maka enzymes sirtuin iji mezuo nke ahụ, ha chọrọ enzymes NAD ka ụmụ irighiri ihe ndị a NAD na-enyere ha aka ịtụchapụta otu Acetyl site na protein maka mgbanwe.
Uru NAD + na-egbochi ịka nká bụ otu n'ime isi ihe mere ndị nchekwa ahụike ji achọ ịhụ ọkwa NAD + ha nke ahụike oge niile. Ka ndị mmadụ na-eto, mbibi DNA ha na-abawanye, nke a na-ebute mbelata ọkwa NAD +, ọrụ SIRT1 na-agbada ma belata ọrụ mitochondrial. Nke a na - eme n'ihi nrụgide cellular oxidative, nke, n'asụsụ layman, pụtara na ọgwụ antioxidant ahụ na radicals adịghị edozi edozi.
N'ihi ya, onye merela agadi nwere ike ịgwọ ọrịa ahụike dịka ọrịa atherosclerosis, ọrịa obi, ogbu na nkwonkwo, ọrịa ụkwara ume ọkụ na ọbara mgbali, n'etiti ndị ọzọ.
N'ime otu ọmụmụ iji gosipụta mmetụta NAD + na nrụgide cellular oxidative, ndị nchọpụta chọpụtara nke ahụ NAD + ọgwụgwọ mere ka mkpụrụ ndụ lab ahụ nwekwuo nrụgide. N'aka nke ọzọ, mkpụrụ ndụ ndị a na-enyeghị na NAD + dabara n'ihe isi ike. Ya mere, ọ pụtara na coenzyme a na - abawanye ndụ nke sel gị, na - enyere ahụ gị aka ịlụ ọgụ dị iche iche na - akpata ọrịa n'ụzọ dị irè karị.
Na ndụ gị kwa ụbọchị, ị na-ekpughe ihe na ọnọdụ dị iche iche nwere ike imebi DNA gị. DNA mebiri emebi na-eme ka ndụ gị dị mkpụmkpụ. Agbanyeghị, na inweta NAD zuru ezu n'ahụ gị, coenzymes ndị a na-eme ka mmezi nke mmezi ahụ mebiri emebi site na ibugharịa elektrọn gaa ebe nwere DNA mebiri emebi. Nke a bụ dị ka n'ọtụtụ ọmụmụ biara na nkwubi okwu mejupụtara NAD + mejupụtara afọ ndụ anụmanụ ma ọ bụ nke mmadụ.
Ọ bụ ihe dị mkpa nye mmadụ niile iji hụ na ha nwere ọkwa NAD zuru oke. .Ba ụba
N'ime onye na-eto eto, NAD + na NADH dị n'ọtụtụ dị elu ma e jiri ya tụnyere ọkwa ndị a hụrụ na ndị agadi. Mbelata ọkwa NAD + na afọ na-eduga n'ịbelata ọrụ SIRT1, si otú a mee ka ihe ịrịba ama nke ịka nká dị ngwa. N'ọnọdụ dị otú a, ụzọ kachasị dị mma iji gbanwee ma ọ bụ gbochie ihe ịrịba ama ndị ahụ bụ ịbawanye ọkwa NAD + ahụ. Site na nkwalite coenzyme ga-akpalite ọrụ SIRT1 karịa, si otú a nweghachi ahụ ike na mmetụta nke ahụ.
A na-egosipụta otutu Sclerosis site na ọkwa NAD dị ala + na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma na-enwe oke ụjọ ahụ. NAD + gbakwunye ga-ebelata ụkọ nke mmiri ọgwụ na sistemụ akwara, si otú a mee ka mgbaaka MS gị ka mma.
Ọ bụrụ na ị nwere ahụike ọgụgụ isi ma ọ bụ ọrịa neurodegenerative dịka ọrịa Alzheimer, ọrịa Parkinson ma ọ bụ ọrịa strok, mgbe ahụ mgbakwunye NAD + na-abịa n'aka iji weghachi ahụike gị. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ ndị a na-akpata NAD + erughi, na-eduga n'ibelata ike ụbụrụ gị na dopamine. Ebe ike ụbụrụ na dopamine bụ ihe dị mkpa nke sistemụ ụbụrụ na nke ụjọ, ihe mgbaàmà gị nwere ike ịka njọ ma ọ bụrụ na ịchọtaghị ụzọ ị ga-esi mee ka NAD + dị elu.
Ọ bụ ezie na a na-eme ibu ọnụ dị ka ụzọ nke nraranye okpukpe, ọ nwekwara uru ahụike dị iche iche ịnye, gụnyere ịba ụba nke ọkwa NAD + na mmụba nke SIRT1.
Ọ bụ ezie na nri na-edozi ahụ dị mma na-edozi ahụ bụ azụ dị mma nke ọkọnọ NAD + dị mma n'ahụ anyị, mgbe ụfọdụ ihe ọzọ ga-eme. Karịsịa, ndị mmadụ gbara afọ 50 chọrọ NAD + karịa ihe nri nkịtị nwere ike inye. N'okwu a, NAD-infused supplement are are kemfe. Ihe mgbakwunye ndị a na-abịa n'ụdị capsules ma dịkwa mfe ịchọta. Ha nwere vitamin B3 (nicotinamide riboside) nke emechara gbanwee ka ọ bụrụ NAD + n'ime ahụ.
Ndị ọrụ nchọpụta achọpụtala na, nicotinamide riboside, ụdị vitamin B3, na-agbanwe n'ime NAD + n'ime ahụ. A na-eji coenzymes, dị ka NAD + ahụ mepụtara, na-emecha na usoro dị iche iche nke metabolic na-ebute ibelata ma ọ bụ gbanwee usoro ịka nká na ahụ mmadụ. N'ihi ya, nri nwere vitamin a (NAD + oriri) nwere ike inye nnukwu NAD + mmeju.
Ihe oriri nke nwere nicotinamide riboside, nke ị nwere ike ịtụkwasị obi iji melite ogo NAD + gị na-agụnyekarị:
Mmiri ara ehi: Nchoputa gosiri na lita otu mmiri ara ehi nwere 9mol nke NAD +.
Ngwurugwu nke Crimini: Ọ bụrụ na I were iko nke Maleini Murice, ị nyela aru gị 3.3mg nke NAD +.
Anụ anụ: ma obu stewed, a asara n’ọkụ ma ọ bụ ghe eghe, otu iko anụ ọkụkọ ga-enye gị 9.1mg nke NAD +.
Yist oriri: Yist bụ isi nke NAD + bara ụba ma e jiri ya tụnyere mmiri ara ehi ara ehi. Ya mere, nri yist dị ka achịcha na achịcha nwere ike itinye aka na ntughari ọkwa NAD + n'ahụ gị. Ọ bụ ezie na biya nwekwara ike ịbụ isi iyi nke coenzyme, a ga-eji ya mee ihe n'usoro.
Itinye nri nri ketogenic: Innata na nri nri keto putara na-egbochi onwe gi nri n’ime nri nke nwere abuba. Mgbe ị malitere iri nri nke ọma, ahụ gị na-abanye na steeti a maara dị ka ketosis nke ọ na-eji abụba karịa glucose maka ume. Nke a na - eme ka NAD + na NADH dịkwuo elu.
N'ọtụtụ oge, itinye mgbakwunye NAD + bụ ihe nchebe kpamkpam. Ọmụmụ mmadụ mere iji gosipụta ọkwa nchekwa nke ịbawanye coenzyme ahụ n’ahụ na-egosi na kwa ụbọchị 1,000mg ruo 2,000 mg NAD + usoro kwa ụbọchị enweghị mmetụta ọ bụla na-emebi ndị mmadụ.
Agbanyeghị, enwere oge ole na ole akọọla mmetụta dị nfe na-akpata n'ihi NAD + oriri. Mmetụta ndị a gụnyere ọgbụgbọ, afọ mgbu, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ (oke ike) yana afọ ọsịsa
NAD + ntụ ntụ, nke a na-eji eme NAD + mmeju, bụ ọcha, hygroscopic na mmiri na-agba mmiri nke ukwuu. Usoro kemịkal nke NAD + ntụ ntụ is C21H27N7O14P2.
Ọ bụrụ na ị bụ onye emepụtara emebere emezi ma nwee mmasị na NAD + ntụ ntụ maka NAD + emejuputa ahia, gbaa mbọ hụ na inweta ya site na ebe a na-akwụghachi ụgwọ iji zere ịzụta adịgboroja. Shouldkwesịrị ịchọpụta na ị na-emeso onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi ihe mgbe ị na-azụ mgbakwunye NAD. Rịba ama na ịnwere ike ịtụ NAD + ntụ ntụ ma ọ bụ NAD + ntanetị n'ịntanetị.